MgHla's Diary (မောင်လှ ရဲ့ ဒိုင်ယာရီ): June 2009
Posted by MgHla Mandalay at 3:43 pm
Myanmar Computer Professionals Association (MCPA, Mandalay)
No.304,Rayworld Complex, Bet 32nd Street & Zaw Ti Ka Street , Bet.77th
Street & 78th Street
Mandalay, Ph:09- 6806311, 6806511, 6806911 (Ext-207), email.address .
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ITနည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာ ပညာရှင် အသင်း (MCPA)က ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်လျှက် ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းသည် တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် အသီးသီးသို့ အသင်းခွဲများဖွဲ့စည်းပြီး ရည်ရွယ်ချက်များကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် အလေးထား ကြိုးစား ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာ ပညာရှင် အသင်း (မန္တလေးတိုင်း) သည် ကွန်ပျူတာနည်းပညာ ပြန့်ပွားရေး၊ ကွန်ပျူတာကိုတွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုလာရေး၊ အဆင့်မီ ကွန်ပျူတာပညာရှင်များ ပေါ်ထွက်လာရေးတို့အတွက်
နည်းပညာ ဟောပြောပွဲများကို အခါအားလျော်စွာ ကျင်းပပေးလျှက်ရှိပါသည်။ ဤဟောပြောပွဲကို မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာ ပညာရှင် အသင်း က မန္တလေးတိုင်းအတွက် ကမကထပြု စီစဉ် ကျင်းပပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အတူ မြန်မာနိုင်ငံအသင်းအနေဖြင့် အခြားတိုင်းနှင့် ပြည်နယ်များသို့လည်း တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ကျ ဟောပြောပွဲများကို ကမကထပြု ကျင်းပပေးလျှက်ရှိပါသည်။
ယခုဟောမည့် ပုဂိ်္ဂုလ်များသည် မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း၏ အလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင်များလည်း ဖြစ်ကြသလို မြန်မာနိုင်ငံ၏ ITကဏ္ဍကို ဖော်ဆောင်လျှက်ရှိသည့် ကုမ္ပဏီကြီးများမှ ဦးဆောင်ပုဂ်္ဂိုလ်များလည်း ဖြစ်ကြပါသည်။
ယနေ့ လူငယ်များ၏ အနာဂတ်အတွက် သူတို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ရတဲ့ ပေးဆပ်ခဲ့ရမှုတွေ၊ ကိုယ်စိတ်နှလုံး အတွေ့အကြုံတွေကိုမျှဝေခံစားပြီး တိုးတက်စေချင်တဲ့ ဆန္ဒနဲ့ ဟောပြောပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဆွေးနွေးမည့် ခေါင်းစဉ်များနှင့် ဆွေးနွေးမည့် ပုဂ္ဂိုလ်များမှာ….
၁။ Ways of Learning Programming
ဦးဝင်းထိန်ဝင်း(Auditor [MCPA], MD [Gusto])
၂။ Foundation of Software Development
ဦးဇော်မိုးထွန်း (EC [MCPA], Technical Director [MIT])
၃။ Essential Skill and Knowledge of Software Engineering
ဦးရဲရင့်ဝင်း(Joint-Secretary [MCPA], MD [BizSoft])
၄။ Current Application Development Trend
ဦးထွန်းခိုင် (EC [MCPA], Director [Integra])
နေရာ : ဆရာဝန်အသင်းတိုက်၊၃၁လမ်း နှင့် ၇၀လမ်းဒေါင့်၊ မန္တလေး။
ရက်စွဲ : ၂၇ ရက်၊ ဇွန်လ၊ ၂၀၀၉ (စနေနေ့)
အချိန် : နံနက် (၈း၃၀) နာရီတိတိ။
My Lables: IT News, Mandalay, Myanmar,
Posted by MgHla Mandalay at 12:56 pm
Posted by MgHla Mandalay at 3:34 pm
Posted by MgHla Mandalay at 9:28 am